Vaovao momba ny LG: fandefasana, finday, takelaka, faka ary maro hafa - Androidsis | Androidsis
Rehefa manondro an'i LG isika dia misy eritreritra elektronika avo lenta sy fitaovana finday avo lenta tonga ao an-tsaina foana. LG dia orinasa Koreana Tatsimo, fantatra manerantany amin'ny famokarana vokatra elektronika isan-karazany. Manamboatra vokatra toy ny fahitalavitra, kojakojan-tokantrano, ary koa finday avo lenta, tablette, ary smartwatches ny orinasa. Izy io dia iray amin'ireo mpitarika an'izao tontolo izao amin'ny sehatry ny elektronika.
Ny kalitao no tena mampiavaka ny vokatra LG, amin'ny sokajy rehetra. Ny telefaona marika Koreana dia miavaka amin'ny kalitao avo lenta, ny fanavaozana tsy tapaka ary ny famolavolana tsara, tena manintona. Amin'ity sokajy ity dia ho hitanao ny vaovao rehetra, ny fampahalalana ary ny hevitra momba ny telefaona LG miaraka amin'ny Android ho toy ny rafitra miasa.
LG mikasa ny hanidy ny fizarana finday noho ny tsy fisian'ny mpividy
ny Ignacio Sala hace 4 volana .
Nandritra ny volana maromaro dia niresaka momba ny drafitra ho avy ataon'ny orinasa Koreana LG, orinasa iray izay nanoro hevitra ny volana Janoary ...
Android 11 dia tonga amin'ny LG V60 ThinQ 5G amin'ny alàlan'ny fanavaozana vaovao
ny Aaron Rivas hace 5 volana .
Tonga hatrany amin'ny finday finday avo lenta kokoa ny Android 11. Amin'ity indray mitoraka ity dia anjaran'ny LG V60 ThinQ 5G no mandray ...
Ny LG W41 dia hita amin'ny sariny voalohany: endri-javatra voasivana
ny Aaron Rivas hace 6 volana .
Ny LG W31, miaraka amin'ny karazany hafa mandroso kokoa, dia ny W31 +, natomboka teny an-tsena tamin'ny volana novambra ...
LG Vvett 5G dia mahazo vaovao farany amin'ny Android 11
Nalefa tamin'ny Mey tamin'ny taon-dasa ho toy ny telefaona andrasana indrindra amin'ny orinasa miaraka amin'ny Snapdragon 765G avy amin'ny ...
LG dia efa manana mpividy: Vingroup, ilay orinasa nividy BQ ihany
ny Ignacio Sala hace 6 volana .
Andro vitsy lasa izay dia nanomboka niely ny tsaho fa nikasa ny hivarotra ny ...
LG dia manome fanazavana momba ny fivoahana avy amin'ny tsenan'ny smartphone
ny Manuel Ramirez hace 6 volana .
Nandritra ny herinandro vitsivitsy dia afaka nanapa-kevitra farany ny LG ary izany dia hitarika amin'ny fivoahana amin'ny tsenan'ny smartphone; na dia…
Ny LG Rollable dia efa zava-misy ary ny orinasa dia mampiseho azy voalohany
ny Manuel Ramirez hace 7 volana .
Raha efa nanaitra anay tamin'io LG Wing hafahafa io i LG, dia manaisotra azy amin'ny alàlan'ny fampisehoana ny LG Rollable ho ...
LG W11, LG W31 ary LG W31 + dia nambara fa eo anelanelan'ny telo eo anelanelan'ny orinasa
ny DaniPlay hace 9 volana .
LG dia mitazona gadona fampisehoana finday vaovao amin'ny taona 2020 izay kasainy hahazoana ...
LG Q52 dia fidirana vaovao miaraka amin'i Helio P35 sy Android 10
LG dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy ny Q52 vaovao, smartphone iray tena mitovy amin'ny LG K52 vao natomboka, tonga ny K52 ...
LG K62 sy LG K52 dia nambara: efijery lehibe ary fakan-tsary efatra aoriana
ny DaniPlay hace 10 volana .
LG dia nanolotra telefaona vaovao roa hanampiana ny tsipika K amin'ny anarana LG ...
LG Q31 dia finday avo lenta fidirana miaraka amin'ny Helio P22 sy Android 10
ny DaniPlay hace 11 volana .
LG dia nanambara finday avo lenta fidirana taorian'ny fanambarana ny LG K31 efa ho iray volana lasa izay,…
Ahoana ny fampidinana lohahevitra maimaim-poana ho an'ny LG G6, LG G5, LG V20
Ahoana ny fanavaozana ny LG G3 mankany Android 7.1.2 (maodely iraisam-pirenena D855)
4 olana LG G6 sy ny vahaolana
LG G6, telefaona tena mahatohitra
Olana LG G3: Fetsy 2 hanatsarana ny fahombiazan'ny LG G3 tsy misy faka
Ahoana ny fanavaozana ny LG G3 amin'ny Android 7.1.1 (modely D855)
Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 amin'ny Android 7.1.1. (Model D802)
Ahoana ny fomba hamohana ny bootloader an'ny LG anao, manan-kery ho an'ny LG G5, LG G4 ary LG V10
Efa manana Recovery sy Root ho an'ny LG G3 miaraka amin'ny Android 6.0 Marshmallow izahay
LG G5, ity no maodely matanjaka hanatsara ny feo
Ny androm-piainan'ny LG V10 dia iray amin'ireo ratsy indrindra amin'ireo finday fantatra amin'ny hoe phablets.
Ahoana ny fanavaozana ny LG G3 International amin'ny Android 6.0 Firmware LG Poland ofisialy
Olana eo amin'ny LG G4: ny efijery mikasika dia tsy mamaly araka ny tokony ho izy
Ahoana ny famerenana ny paompy indroa amin'ny LG G2 hamonoana ny efijery ary handeha hatrany
Ahoana ny fanavaozana ny LG G2 anao amin'ny firmware D80220H eropeana farany
Fampitahana eo amin'ny Nexus 6 vs LG G3
LG G2: Ahoana ny fampidinana sy fametrahana ny Remote Quick amin'ny Android Android AOSP madio
LG G3 Stylus, mamakafaka amin'ny horonantsary an'ity smartphone ity izahay izay mikendry ireo tsena hipoitra
Ahoana ny fakana pikantsary amin'ny LG G3
Sintomy ary apetaho ny klavier LG G3 (Ho an'ny mpampiasa Root sy Recovery ihany)